Hihatsara ny fampihorohoroana horonantsary mpamokatra varotra - AASraw vovoka
AASraw dia mamokatra vovo-dronono Cannabidiol (CBD) sy huile essentielle hemp!
CBD mety levona amin'ny rano
Menaka tena ilaina Hemp
Menaka hemp volamena
Vovoka nalaina avy amin'ny tsimok'aretina varimbazaha
Testosterone phenylpropionate vovoka
Testosterone decanoate vovoka
/ Products / Hormone manatsara ny firaisana
Ny hormonina fampiroboroboana ny firaisana dia mampiditra vokatra voajanahary sy zavatra simika. Ao amin'ny orinasa izahay dia mampiditra fitaovam-pitaovam-piasàna hita matetika amin'ny vokatra hita eny an-tsena.
Ny haavon'ny vehivavy estrogen, progesterone, ary testosterone dia mihena ara-dalàna noho ny taonany, indrindra mandritra sy aorian'ny fijanonana. Mitadiava fomba hitazomana ny firaisana ara-nofo hataonao, na dia ambany aza ny haavon'ny hormonina anananao. Ary, ho an'ny lehilahy sasany, miaraka amin'ny taona, dia mihena ny filan'ny nofo. Ary, indrindra, ny lehilahy sasany dia manana olana tsy mitongilana erectile. Raha te hampiasa fanafody manatsara ny firaisana ara-nofo, dia ampio izy ireo hankafy ny fiainana, na hanana fiainana tsara kokoa amin'ny firaisana.
Erectile dysfunction (impotence) dia ny tsy fahafahana mahazo sy mitazona mafy ny fiorenana ho an'ny firaisana ara-nofo.
Ny fananana olana amin'ny fananganana tsindraindray dia tsy voatery ho ahiahy. Raha olana tsy mandeha ny erectile dia mety miteraka fihenjanana, misy fiatraikany amin'ny fahatokisanao tena ary manampy amin'ny olan'ny fifandraisana. Ny olana mahazo na mitazona fananganana dia mety ho mariky ny toe-pahasalamana ambanin'ny tany izay mila fitsaboana sy aretina mety hitranga amin'ny aretim-po.
Ny fitsaboana dia miankina amin'ny antony.
Ny fanazaran-tena, indrindra ny fampiharana aerôbika mandritra ny afovoan-tany dia mahomby amin'ny fisorohana ED; Ny fanatanjahantena dia ny fanadihadiana. Ho an'ny mpifoka sigara, ny vokatra dia miteraka fihatsarana.
Ny fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana na fanafody fitsaboana vaksiny dia fitsaboana voalohany, arahin'ny fidirana amin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny penis, ary ny penile implants.
The PDE5 inhibitors sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) and tadalafil (Cialis) are prescription drugs that are taken orally.
Ny crème izay mampifandray ny alprostadil amin'ny fanamafisana ny DDAIP dia nankatoavina tany Canada ho toy ny fitsaboana voalohany amin'ny fitsaboana erectile.
Ny iray amin'ireto fanafody manaraka ireto dia mety hidona amin'ny penis: papaverine, phentolamine, ary prostaglandin E1.
Sildenafil / Sildenafil Citrate (viagra) is a common treatment for ED. Manampy anao ho sarotra ny fotoana mety. Tsy tokony hifindra amin'ny 6 ianao hatramin'ny misasak'alina fotsiny amin'ny alalan'ny fandraisana azy.
Tadalafil / Cialis dia fitsaboana ara-pahasalamana mahomby indrindra ho an'ny fahombiazan'ny haavo, latsaky ny dosage, maharitra maharitra.
Ankoatr'izay, ny HCL Dapoxetine dia nino ny manampy ny lahy haharitra ela kokoa mandritra ny fotoana mahatsiravina ara-pananahana, rehefa mampiasa ny fampiasana miaraka amin'ny cialis na viagra.
Rehefa avy naka tabilao tokana, mijanona ao amin'ny vatanao ny sasany amin'ireo mofomamy CIALIS mandritra ny andro 2. Ny vinaingitra mavitrika dia afaka maharitra kokoa raha manana olana amin'ny voa na aty aminao ianao, na mandray fanafody hafa.
Mety Misy Fitsaboana Lehibe ve ny CIALIS?
Lazao amin'ny mpitsabo anao ny fanafody rehetra azonao, indrindra:
fanafody antsoina hoe "nitrates" izay matetika natokana ho an'ny fanaintainan'ny tratra
Ny fanafody antsoina hoe guanylate sikase dia fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-tsaina sy ny fihanaky ny homamiadan'ny aretina
Ireo alika mpangalatra dia matetika voatery mametraka olana amin'ny prostate
fanafody mitondra ny otrikaretina VIH na karazana medikaly antilika
karazana antibiotika toy ny clarithromycin, telithromycin, erythromycin (marika maromaro misy, azafady mifandraisa amin'ny mpitsabo anao mba hamaritana raha mandray ity fanafody ity ianao)
fanafody hafa na fitsaboana momba ny dysfunction erectile (ED)
Ny CIALIS koa dia mivarotra ny ADCIRCA ho an'ny fitsaboana aretin-tsaina. Aza mandray an'i CIALIS sy ADCIRCA. Aza mandray sildenafil sildenafil amin'ny CIALIS.
Haneho izay 10 valiny
Asehoy ny vokatra 32
Asehoy ny vokatra 48
Cytotecet acetate poids
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.fisfera.fr www.cmoapi.com www.domasign.com www.hashuni.com